Culimada shirku uga socda Muqdisho oo ku baaqay in la fidiyo banaan-baxyo ka dhan ah shabaab – Radio Daljir
Seteembar 11, 2013 3:45 b 0
Muqdisho, September 11, 2013 – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maanta la filayaa in lagu soo xiro Shirweynaha ?xal u helidda mushkiladda Guluwiga ee ku talax tagga Diinta?, kaas oo mudo shan maalmood ah ka socday caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Waxaa la filayaa in ay shirka ka soo bixi doonaan qoddobo waa weyn iyo talooyin la xiriira go?aanka culimada kadib mudadii uu shirku ka socday Muqdisho, qaar ka mid ah culimada waa weyn ee shirka ka qeyb-gashay ayaa jeediyey baaqyo ka dhan ah Al-shabaab.
Sheikh Xasan Jaamici oo ka mid ah culimada ka timi dalka Maraykanka ee shirka jooga ayaa ku baaqay in ay muhiim tahay in la qabto Banaan-baxyo waa weyn oo ka dhan ah ururka Al-shabaab, si loo afjaro ?dilka culimda iyo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.
Wuxuu sheegay in shirka kadib loo qalab qaato Banaan-baxyada waa weyn ee ka dhanka ah weerarada, dilalka iyo marin habaabinta Al-shabaab, taas oo uu ku tilmaamay in ay tahay jid wanaagsan oo loo mari karo in la soo afjaro xagjirnimada ururka iyo dhalinyarada la qalday.
Docda kale Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka yimi dalka Kenya ayaa isna sheegay in ay aqoon daro u geysey ururka al-shabaab gaalaysiinta dadka ka soo horjeeda fikrada ururka, wuxuu sheegay sababta keenta in ay dadka dilaan ay tahay midaas, iyagoo aamisan in ay dadku gaalo yihiin.
? Dhiiga qof muslim ah oo la daadiyo waa xaaraan, Qofka muslimiinta isku qarxinaya ?ogooda in uu naarta ku waarayo, dhalinta la qaldayo waxaan leeyahay ka digtoonaada ficilada xagjirnimada ah ee aan diinta Islaamka ku saleysneen? ayuu yiri Sheikh Shakuul.
Shirka oo maanta soo idlaanaya ayaa la filayaa in laga soo saaro qoddobo waa weyn iyo talooyin ka yimi culimada Soomaaliyeed ee shirka jooga, kuwaas oo kadibna loo soo bandhigayo dadka Soomaaliyeed iyadoo la shaacin doono fatwo ka dhan ah ururka Al-shabaab, sida aan ku helayno wararka la xiriira shirka.